कोठा 622२२ को पहेली: Joël डिकर को नवीनतम थ्रिलर | वर्तमान साहित्य
कोठा को पहेली 622
जोल डिकर द्वारा उद्धृत।
कोठा को पहेली 622 स्विस लेखक जोएल डिकर द्वारा नवीनतम उपन्यास हो। फ्रेन्च मा यसको मूल संस्करण मार्च २०२० मा प्रकाशित भएको थियो। तीन महिना पछि यो स्पेनी मा प्रस्तुत गरिएको थियो, अमाया गार्सिया ग्यालेगो र मारिया टेरेसा गलेगो उरुटिया द्वारा अनुवाद संग। उनको अघिल्लो कामहरु जस्तै, यो एक हो रोमाञ्चक.
जे होस् नायक लेखक को रूप मा एउटै नाम बोक्छ, यो एक आत्मकथा होइन। बारेमा, डिकर भन्छन्: "... मेरो एउटा सानो हिस्सा छ, तर म मेरो जीवन बयान गर्दिन, म आफैलाई बयान गर्दिन... "। त्यस्तै गरी, लेखक उपन्यास मा एक विशेष समर्पण गरे: "मेरो सम्पादक, साथी र शिक्षक, बर्नार्ड डे Fallois (1926-2018) को लागी। आशा छ संसारका सबै लेखकहरु एक दिन यस्तो असाधारण सम्पादक भेट्न सक्छन्। "
1 कोठा 622२२ को पहेली को सारांश
1.1 वर्षको शुरुवात
1.2 एक अद्भुत मुठभेड
1.3 बेवारिसे माया
1.4 सबै भत्कियो
1.5 आल्प्स को यात्रा
1.6 छिमेकी लेखक
1.7 अनुसन्धान प्रगति
2 कोठा 622२२ को पहेली को विश्लेषण
2.1 काम को आधारभूत डाटा
2.3 जोल डिकर
3.1 जोल डिकर किताबहरु
सारांश कोठा को पहेली 622
जनवरी 2018 मा, Joël आफ्नो जीवन मा एक कठिन समय को माध्यम बाट जान्छ: बर्नार्ड डे फेलोइस, उनका महान मित्र र सम्पादक, को निधन भयो। त्यो मानिस जवान मानिसको जीवनमा एक प्रतिनिधि व्यक्तित्व भएको थियो। उहाँ एक लेखक को रूप मा आफ्नो क्यारियर को सफलता को णी हुनुहुन्छ, त्यसैले उसले उसलाई सम्मान गर्ने निर्णय गर्छ। तुरुन्तै, उहाँ आफ्नो सल्लाहकार बर्नार्ड को लागी समर्पित किताब लेख्न को लागी आफ्नो कार्यालय मा शरण लिनुहुन्छ।
एक अद्भुत मुठभेड
Joël एक हदसम्म अलग लेखक हो; वास्तव मा, उहाँ मात्र आफ्नो वफादार सहायक डेनिस संग लगातार सम्पर्क राख्छ। उनी एक हुन् जो उनलाई दैनिक ताजा हावा र व्यायाम गर्न को लागी प्रोत्साहित गर्छन्। एक दिन जब उनी दौड बाट फिर्ता आउछन् उनी अप्रत्याशित रूप बाट उनको नयाँ छिमेकी Sloane मा टक्कर। यद्यपि उनीहरु केहि शब्दहरु मात्र आदान प्रदान गर्छन्, जवान मानिस आकर्षक महिला द्वारा मोहित छन्।
त्यस बेला देखि, Joël Sloane को बारे मा अधिक जान्न रुचि थियोतर उसलाई बाहिर सोध्ने साहस थिएन। एक अप्रिल रात, बस संयोग द्वारा, उनीहरु एक ओपेरा कन्सर्ट मा मेल खान्छन्, उनीहरु कुरा गर्छन् र कार्य पूरा गरे पछि उनीहरु डिनरमा जान्छन्। त्यहाँ बाट, उनीहरु दुबै दुई महिना को तीव्र जोश मा बाँचिरहेका छन् कि जेएल लाई उनी पूर्ण खुसी मान्दछन्। एक प्लस को रूप मा, उनी सरस्वती हो कि उसलाई बर्नार्ड को सम्मान मा किताब संग जारी राख्न को लागी अनुमति दिन्छ।
को ईन्ग्मा ...
थोर - थोरै जोएल आफ्नो प्रिय संग समय बिताउनु भन्दा लेखन मा अधिक ध्यान केन्द्रित। मुठभेड मात्र क्षणभंगुर थियो, जो एक सम्बन्ध को फ्रैक्चर को लागी नेतृत्व गर्यो कि एकदम सही लाग्यो। स्लोनले यो सबै एक पत्र को माध्यम बाट समाप्त गर्न को लागी निर्णय गरे कि उनी भवन को चौकीदार संग छोडेर गए। जोएलको आइडल पत्र पढे पछि पतन हुन्छ, त्यसैले उनी शान्ति को खोजी मा त्यो ठाउँ बाट तुरुन्तै भाग्ने संकल्प गर्दछन्।
आल्प्स को यात्रा
त्यो कसरी छ Joël Verbier मा प्रसिद्ध पैलेस होटल सम्म जान्छ स्विस आल्प्स मा। आगमन मा, एक अजीब विस्तार लेखक को ध्यान कैच: कोठा कि उनीहरुले तपाइँलाई बस्न को लागी नियुक्त गरेका छन् 621२१ र नजिकैको एक "621२१ बीआईएस" को साथ पहिचान गरीएको छ। जब परामर्श, उनीहरु बताउँछन् कि नम्बर संख्या एक अपराध को कारण ago२२ कोठा मा भएको थियो, एक घटना हो कि अझै सम्म समाधान गरीएको छैन।
स्कारलेट पनि होटल मा बस्छन्, एक प्रशिक्षु उपन्यासकार जो उसको सम्बन्ध विच्छेद पछि खाली गर्न को लागी यात्रा गरे। उनी 621२१ कोठामा छन्, र जब उसले जोएललाई भेट्यो उसले उसलाई उसलाई उसको केहि लेखन प्रविधिहरु संग निर्देशन दिन सोध्यो। त्यस्तै गरी, उनी उसलाई उस पहेलो को बारेमा बताउँछिन् जहाँ उनी बसिरहेकी छिन् र उसलाई यो समाधान गर्न को लागी मामला को जांच गर्न को लागी आश्वस्त पार्छिन्।
अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा, जोएल हत्याको वरिपरि महत्त्वपूर्ण तथ्यहरु पत्ता लगाउँछन्. 2014 को जाडो मा स्विस बैंक Ebezner को अधिकारीहरु होटल मा नयाँ संस्था को अध्यक्ष नियुक्त गर्न बैठक थिए। उनीहरु सबै उत्सव को रात को लागी Verbier मा बसे। भोलिपल्ट बिहान मृत देखियो निर्देशकहरु मध्ये एक: कोठा 622२२ मा अतिथि।
निडर दम्पतीले रहस्यको एक गुच्छा अनावरण गर्दछ कि उनीहरुलाई हत्यारा सम्म पुर्‍याउँछ। यो कसरी कृत्रिम, भूखंड, विश्वासघात, प्रेम त्रिकोण, भ्रष्टाचार र स्विस बैंकि leadership नेतृत्व को वरिपरि शक्ति खेल प्रकाश मा आउनेछ।
विश्लेषण कोठा को पहेली 622
कोठा को पहेली 622 द्वारा बनाईएको हो १००० पृष्ठहरू, मा विभाजित4मुख्य भागहरु मा विकसित Cha अध्यायहरू। इतिहास छ पहिलो र तेस्रो व्यक्ति मा गणना, र कथा आवाज विभिन्न पात्रहरु को बीच वैकल्पिक। त्यस्तै गरी, धेरै अवसरहरुमा कथानक वर्तमान (२०१)) बाट अतीत (२००२-२००३) मा सार्दछ; यो क्रम मा हत्या र संलग्न व्यक्तिहरु को विवरण जान्न को लागी।
यस पुस्तक मा लेखक प्रस्तुत राम्रो तरिकाले तैयार गरीएको पात्रहरु को एक किसिम को कहानी भर मा प्रकट। ती मध्ये, यसको नायक बाहिर खडा:
लेखक दुबै उनको नाम र एक लेखक को रूप मा उनको पेशा संग साझा गर्नुहोस्। उहाँले दुई आघातपूर्ण घटनाहरु पछि आफूलाई खाली गर्न को लागी आल्प्स को यात्रा गर्नुभयो। त्यहाँ, एक आकर्षक र रोचक महिला को लागी धन्यवाद, उहाँ एक हत्या अनुसन्धान मा डुब्न। अन्तमा, उसले हत्यारा पत्ता लगाउँछ र ठूलो भ्रष्टाचार प्रकट गर्दछ कि मामला वरिपरि।
यो एक छ अनुभवहीन उपन्यासकार कि उनले आफ्नो भर्खरको वैवाहिक अलगाव द्वारा संचालित केहि फरक दिन बिताउने निर्णय गरेको छ। उनी जोएल डिकरको छेउमा कोठामा बस्छिन्, त्यसैले उनी यस प्रसिद्ध लेखकको प्रविधिहरु सिक्नको लागी फाइदा लिन्छन्। उनी यो धेरै पहिले रहस्यमय हत्या को अनुसन्धान मा ठूलो मद्दत को हुनेछ।
जोल डिकर १ 16 जुन १ 1985 on५ मा स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा जन्मिएको थियो। उहाँ एक जेनेभा पुस्तक बिक्रेता र एक फ्रेन्च शिक्षक को छोरा हुनुहुन्छ। उनको स्कूल प्रशिक्षण उनको गृहनगर मा, Collège Madame de Staël मा थियो। 2004 मा -विश्वविद्यालय प्रवेश गर्नु अघि- पेरिस मा एक बर्ष को लागी अभिनय कक्षाहरु मा भाग लिनुभयो। उहाँ जेनेभा फर्कनुभयो, र २०१० मा उनले युनिभर्सिटी डे जेनेभ बाट कानून को डिग्री प्राप्त गरे.
एक लेखक को रूप मा आफ्नो प्रारम्भिक दिन मा एक रोचक किस्सा बाँच्यो al युवा साहित्य प्रतियोगिता बाट अयोग्य ठहरिन्छ। डिकरले आफ्नो खाता प्रस्तुत गरेका थिए टाइगर (२००५), तर अस्वीकार गरियो किनभने न्यायाधीशहरु मान्दथे कि उनी काम को निर्माता थिएनन्। त्यसपछि उनी युवा फ्रान्सेली बोल्ने लेखकहरु को लागी अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार बाट सम्मानित गरियो र पाठ अन्य विजेता कथाहरु संग एक संकलन मा प्रकाशित भएको थियो।
त्यही वर्ष Prix ​​des Ecrivains Genevois मा भर्ना भयो (अप्रकाशित पुस्तकहरु को लागी एक प्रतियोगिता), उपन्यास संग हाम्रा बुबाहरूको अन्तिम दिनहरू. विजेता भएपछि, उनले यसलाई २०१२ मा प्रकाशित गर्न सफल भए उनको पहिलो औपचारिक काम को रूप मा। त्यहाँ बाट, लेखक को क्यारियर मा वृद्धि भएको छ। यो वर्तमान मा चार शीर्षक हो कि बनेको छ Bestsellers र जसको साथ यो9मिलियन भन्दा बढी पाठकहरु लाई जितेको छ।
जोल डिकर किताबहरु
हाम्रा बुबाहरूको अन्तिम दिनहरू (2012)
ह्यारी क्युबर्ट केसको बारेमा सत्यता (2012)
बाल्टीमोर पुस्तक (2015)
स्टेफनी मेलरको बेपत्ता (2018)
कोठा को पहेली 622 (2020)
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » कोठा को पहेली 622